Ithegi: idatha enkulu | Martech Zone
Ithegi: idatha enkulu
Kangangamashumi eminyaka, ukuthengisa kwi-Intanethi kuye kwahluka. Abapapashi bakhethe ukunikezela ngeendawo zabo zentengiso ngokuthe ngqo kubathengisi okanye bafakele izindlu zentengiso ukuze bazithengele zona. Vula Martech Zone, sisebenzisa intengiso yethu yezindlu ngolu hlobo... sisebenzisa iGoogle Adsense ukwenza imali ngamanqaku kunye namaphepha aneentengiso ezifanelekileyo kunye nokufaka unxibelelwano oluthe ngqo kunye nokubonisa iintengiso kunye nabaxhasi kunye nabaxhasi. Abakhangisi bebesebenzisa ukulawula ngesandla
Iindlela zeMarTech eziqhuba uTshintsho lweDijithali
NgoLwesihlanu, Oktobha 22, 2021 NgoLwesihlanu, Oktobha 22, 2021 UPavel Obod
Iingcali ezininzi zokuthengisa ziyazi: kwiminyaka elishumi edlulileyo, iteknoloji yokuthengisa (Martech) iqhume ekukhuleni. Le nkqubo yokukhula ayizukwehla. Ngapha koko, uphononongo lwamva nje luka-2020 lubonisa ukuba kukho ngaphezulu kwe-8000 yezixhobo zobuchwepheshe bokuthengisa kwimarike. Uninzi lwabathengisi basebenzisa izixhobo ezingaphezu kwesihlanu ngosuku olunikeziweyo, kwaye ngaphezu kwe-20 jikelele ekuqhutyweni kwezicwangciso zabo zokuthengisa. Amaqonga kaMartech anceda ishishini lakho libuyise utyalo-mali kunye noncedo
Ukuthengisa kwidijithali sisiseko seshishini ngalinye le-ecommerce. Isetyenziselwa ukuzisa ukuthengisa, ukwandisa ulwazi lwebrand, kunye nokufikelela kubathengi abatsha. Nangona kunjalo, intengiso yanamhlanje igcwele, kwaye amashishini e-ecommerce kufuneka asebenze nzima ukoyisa ukhuphiswano. Ayisiyiyo loo nto-ikwagcina umkhondo wetekhnoloji yakutshanje kunye nokuphumeza iindlela zokuthengisa ngokufanelekileyo. Enye yezinto ezintsha zetekhnoloji ezinokuguqula ukuthengisa kwidijithali bubukrelekrele bokuzenzela (AI). Makhe sibone ukuba njani. Imicimbi ebalulekileyo ngeNamhlanje
Khuphela: Isikhokelo esicacileyo nesigqibeleleyo kumava asekwe kwiAkhawunti (ABX)
I-Demandbase iyayiguqula indlela iinkampani ze-B2B ezisiya kwintengiso. I-Demandbase One lelona gumbi lipheleleyo lezisombululo ze-B2B zokuya kwintengiso, ukudibanisa amava asekwe kwiakhawunti, intengiso, ubukrelekrele bokuthengisa, kunye nezisombululo zedatha ye-B2B ukuze amaqela okuThengisa kunye neeNtengiso kwezona nkampani zinkulu nezikhulayo zikwazi ukusebenzisana ngokukhawuleza, yabelana ngobukrelekrele, kunye namava okukhula okuqhumayo. IGosa eliyiNtloko leNtengiso, uJon Miller, ubhale wapapasha le ncwadi intsha intle ngokuvela kweNtengiso esekwe kwiAkhawunti (ABM)… Amava asekwe kwiAkhawunti (ABX). Intoni
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 9, 2021 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 9, 2021 Douglas Karr
Umthengi wamva nje esisebenze naye wayenobugcisa obunzima obudibanisa kunye namaqonga aliqela kunye neendawo zokungena ezingaphezulu. Iziphumo yayiyitoni yokuphinda-phinda, imiba esemgangathweni yedatha, kunye nobunzima ekulawuleni ukuphunyezwa okungaphaya. Ngelixa bafuna ukuba songeze kokunye, sicebise ukuba bachonge kwaye basebenzise iQonga leDatha yaBaxumi (CDP) ukulawula ngcono onke amanqaku okungena kwedatha kwiinkqubo zabo, ukuphucula ukuchaneka kwedatha, ukuthobela